Hadda waxaa la heli karaa trailer cusub xilli ciyaareedkii labaad ee Central Park | Waxaan ka socdaa mac
Xayeysiin cusub oo loogu talagalay xilli-ciyaareedka labaad ee Central Park hadda waa la heli karaa
Jadwalka sii deynta ee Apple TV + ee bishaan Juun waa mid aad u ballaaran, oo markaan isku aragno bartamaha bisha, weli waxaa jira tiro badan oo cusub oo la sii daayo si ay u yimaadaan adeegga fiidiyowga ee Apple.
Apple TV + ayaa kaliya la wadaagtay marinkeeda YouTube bar cusub oo loogu talagalay xilli ciyaareedkii labaad ee barnaamijka muusikada caanka ah ee Central Park, xilli labaad oo la daawan doono July 25, 9 maalmood.
Central Park waa majaajillo majaajillo ah oo majaajillo ah oo muusig ah, in kasta oo loola jeedo carruurta, waa barnaamij aad ugu fiican qoyska oo dhan. Taxanaha ayaa ahaa loo magacaabay Abaalmarinta Emmy iyo Abaalmarinta Sawirka NAACP, marka waad ogtahay inay wax sifiican usocdaan.
Muuqaalkan Emmy iyo NAACP ee loo magacaabay taxanaha muusigga waxaa abuuray, qoray oo soo saaray Emmy oo ku guuleystay Loren Bouchard, oo ay weheliso guuleystaha Grammy Josh Gad iyo Emmy oo ku guuleystay Nora Smith. Xidigaha Xidigaha waxaa kamid ah Josh Gad, Leslie Odom Jr, Daveed Diggs, Emmy Raver-Lampman, Kathryn Hahn, Tituss Burgess iyo Stanley Tucci.
Central Park waxay ku wareegsan tahay qoyska Tillerman, qoys daryeela Central Park, sambabka magaalada New York. Qoysku wuxuu ka kooban yahay Owen (maareeyaha baarkinka), Paige (xaaskiisa) saxafi. Berde Cole waa eey jecel yahay halka Molly uu maalintii ku qaato sawir gacmeedyo majaajillo superhero ah.
Ku xun taxanahan waxaa loo yaqaan Bitsy, wakiilka guryaha ee raba badalo jardiinada caanka ah ee Magaalada New York silsilad hudheel ah. Abuuraha silsiladan, Loren Bouchard, wuxuu la mid yahay taxanaha 'Bob's Burger'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Xayeysiin cusub oo loogu talagalay xilli-ciyaareedka labaad ee Central Park hadda waa la heli karaa
Dhageysiga codka Apple Music ayaa dhawaan India imanaya
IKEA iyo Sonos waxay wada shaqeeyaan si ay u soo bandhigaan qaab dhismeedka SYMFONISK